Ruushka Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Ruushka'
Madaxweyne dalka Maraykanka ee Donald Trump ayaa difaacay sir uu la wadaagay dalka Ruushka, ka dib markii uu muran ka dhashay macluumaad sir ah oo uu madaxweyne Trump la wadaagay wasiirka arrimaha dibedda ee dalka Ruushka. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay inuu wasiirka arimaha dibedda ee dalka Ruuhka Sergei Lavrov la wadaagay sir …
February 16, 2017 – Madaxweynaha Cusub ee dalka Maraykanka Donald Trump iyo shaqsiyaad isaga aad ugu dhow ayaa looga shakisanyahay inay xirii hoose la leeyihiin dalka Ruushka. Maalitii talaadada ayay ahayd markii Kaaliyihiisa dhanka ammaanka Michael Flynn ee xukuumaddii uu soo dhisay lagu qasbay inuu is casilo, kadib markii lagu helay inuu been u sheegay …
Diyaarad Siday 91 qof oo Lagu La’yahay Gudaha Dalka Ruushka (VIDEO)
December 25, 2016 – Diyaarad ay leeyihiin ciidanka Millateriga ee dalka Ruushka, ayaa la waayay, kadib markii ay ka duushay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Sochi ee dalka Ruushka. Wasaarada Difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay Diyaaradan oo Namberkeeda ahaa Tu-154 ay saarnaayeen dad gaaraya 91 ruux oo isugu jira Saraakiil ciidan, Fanaaniin, Wariyeyaal. Diyaarada ayaa …
DAAWO: Qaabkii Askariga Turkiga uu Isugu Diyaariyay Dilka Danjirihii Ruushka oo la soo Bandhigay (VIDEO)
December 21, 2016 – Askarigii qaarijiyay danjirihii dalka Ruushka u fadhiyay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa waxaa la soo bandhigay sidii ay wax u dhaceen intii uusan bilaabin toogasha safiirka. Ninkan oo la sheegay inuu ahaa askari waardiye ka hayay danjiraha ayaa halmar ku soo kala fireeyay ninkii uu waardiyaynayay, waxaadna muuqaalka ka arkaysaa …
Maydka Danjirihii Dhawaan Lagu Toogtay Dalka Turkiga oo Laga Dajiyay Magaalada Moscow ee Dalka Ruushka (VIDEO)
December 21, 2016 – Waxaa Magaalada Moskow ee caasimadda dalka Ruushka laga dejiyay Maydka danjirihii dhawaan lagu toogtay dalka Turkiga isaga oo ka qudbaynaya goob Bandhig farshaxan lagu qabanayay oo ku taalada Magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Dowlada Ruushka ayaa Diyaarad qaas ah u soo dirtay Meydka Safiirkooda ee lagu dilay dalka Turkiga ee Andrei …
DAAWO: Danjirihii Dalka Ruuska u Fadhiyay Magaalada Ankara oo Caawa la Toogtay (VIDEO)
December 19, 2016 – Safiirkii dalka Ruushka u fadhiyay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, ayaa goor dhow oo caawa ah ayaa waxaa toogasho ku dilay nin bistoolad ku hubaysan. Safiirka ayaa waxaa la toogtay isaga oo furaya matxaf sawirro lagu soo bandhigay ee magaalo madaxda Turkiga ee Ankara. Muuqaal live-ah oo laga duubayay munaasabada ayaa muujinaya Mr …
Nin ku Dhow Madaxweyne Putin oo Saadaaliyay inuu Dagaal Dhici Doono Hadii Hillary Clinton la Doorto (VIDEO)
October 14, 2016 – Nin ku dhow madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu saadaalinayo dagaal ay wada galaan ruushka iyo Maraykanka, hadii la doorto Hillery Clinton. Ninkan oo lagu magacaabo Vladimir Zhirinovsky ayaa ah saaxiibka madaxweyne Putin, waxa uuna hadda madax ka yahay xisbi mucaarad ah oo baarlamaanka dalkaasi ku jira. Zhirinovsky ayaa Hillarey Clinton ku …
Xiriirka Ruushka iyo Ukraine oo Meel Xun Maraya iyo Ruushka oo Gantaalada S-400 ku Xiray Jasiiradda Crimea (VIDEO)
August 13, 2016 – Madaxweynha dalka Ruuska ayaa gantaaladiisa ugu casrisan ee S-400 u diray Jasiiradda ay xooga ku qansadeen ee Crimea oo ka tirsan dalka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa gantaalada casriga ah ee S-400 ku rakibey jasiiradda, waxa ayna sidoo kale ku hanjabeen inay Ukraine u goynayaan xiriirka Diblomaasiyadeed hadii aysan joojin dhaq dhaqaaqyada …